Haweenka | Radio Himilo
Sadia Nour 6 days ago
Himilo – Maamulka gobolka Uttar Pradesh ee dalka India ayaa amaray toddobaadkii hore in la burburiyo hoyga ay kaga nool yihiin Afreen Fatima iyo qoyskeeda magaalada Prayagraj. Amarkaasi kaddib saacado guheed ayaa dhulka lagu dhigay dhismahaasi oo ka koobnaa laba ...
La kulan – Macalimadda Aragga la’
Ahmed Haaddi March 27, 2022
Himilo – Aan waa macalimad iyo hooyo qurux badan. Laakiin aan helin nimcadii aragga. Mana ahan kaligeed. Waxaa tabteeda oo kale ah inanteeda oo aan wax arki Karin. Uma noola sida indhoolayaal badan oo u baahan in hadiyo jeer la ...
13 jir neef qabta oo 13 saacadood dabaalatay Badda u dhaxeysa Sri Landka iyo Hindiya!
Ahmed Haaddi March 22, 2022
Himilo – Jiya Rai; oo ah 13 jir la dhibban xanuunka neefta ayaa dabaal isaga kala gudubtay Badda u dhaxeysa Sri Lanka iyo Hindiya masaafo dhan 29km. Waxaa ay Riya dabaal ka billowday Magaalada Talaimannar oo ka tirsan Sri Lanka ...
Himilo – Sharikadda Tareennada ee laga leeyahay waddanka Spain laguna magacaabo Renfe, ayaa soo bandhigtay shaqo kaxeynta Tareennada ah oo u gaar ah Haweenka waxaana ay dooneysay kaliya 30 Haween ah oo shaqadaas qaban kara. Hayeeshee codsiyada soo gaaray xafiiska ...
La kulan – Haweeney carruurta naafadada ah ku daryeesha gurigeeda
Ahmed Haaddi March 1, 2022
Himilo – Ma ahan dugsi wax-barasho halka ay carruurtani ku sugan yihiin. Mana ahan goob xanaano ah oo lagu daryeelo. Waa guri ay leedahay haweeneyda isu aragta inay gebigoodba hooyo u wada tahay taas oo u sameysay gabaad ay ku ...
Haweeney dhibbane u aheyd buro 47 Kilogram ah oo la saaray
Ahmed Haaddi February 20, 2022
Himilo – Haweeney 56 jir ah ayaa loo sameeyay qalliin naf badbaadin ah kadib markii laga saaray buro culeyskeedu yahay 47 Kilogram. Waxaa loo diiwaan geliyay buradii ugu weyneyd India sida laga soo xigtay dhakhaatiirta qalliinka sameeyay. Haweeneydan oo aan ...
Hooyo maqalka la’ oo qaadatay shahaadada PhD-ga
Ahmed Haaddi February 2, 2022
Himilo – Dedaal, adkaysi, go’aan qaadasho iyo sabar, Islam Al-Juduuc oo u dhalatay Urdun oo soddon jir ah ayaa u suurtagashay inay shahaadada doctorate-ka ka qaadato Jaamacadda Urdun oo ay ku takhasustay waxbarashada gaarka ah, in kasta oo ay maqalka ...
La kulan: Haweeneydii ugu horreysay ee ku biirtay maxkamadda sare ee Pakistan
Ahmed Haaddi January 31, 2022
Himilo – Caa’isha Malik oo 55 jir ah ayaa noqotay haweeneydii ugu horeesay oo muslim ah oo garsoore ka noqota maxkamadda ugu sarreysa dalka Pakistan tan iyo markii dalkan la aasaasay 1947, waxaana sheekada haweeneydan si weyn u hadal heysa ...
Ahmed Haaddi January 17, 2022
Himilo – Gabar 12 jir ah oo waxbarashada dugsiga sare uga baxday da’da 9 jirka ayaa noqotay ardaygii ugu da’da yaraa ee ka qalin-beddesha koleejka Broward taariikhda iskuulkaas markii ugu horreysay muddo 61 sanno ah. Sawsan Ahmed oo ku nool ...
Ahmed Haaddi January 16, 2022
Himilo – Haweeney u dhalatay dalka Turkiga (Nafeya Jazz) ayaa xirneyd dhar gaduudan muddo 67 sano ah, ka dib riyo ay ku riyootay iyadoo yar. Jaz, 77 jir ah, waxay degan yahay tuulada Gozgulu ee gobolka Bingol (bari), waxayna leeyahay ...